Izindlela Eziyisi-7 Zobuwula Indlela Yokwenza Ukunwetshwa Kwezinwele Z – SL Raw Virgin Hair LLC.
Izindlela Eziyisi-7 Zobuwula Indlela Yokwenza Ukunwetshwa Kwezinwele Zakho Kuhlale Isikhathi Eside
Septhemba 21, 2020
Usebenzise amarandi amakhulu ambalwa ezandisweni zezinwele zakho. Ngakho-ke, ufuna ukuthi zihlale isikhathi eside ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuqina futhi zibukeke njengesiphepho esidlule. Ngakho-ke, yini ongayenza ukuze welule impilo yezandiso zakho zezinwele?
Nazi izindlela ezingu-7 eziwubuwula zokwenza izandiso zakho zezinwele zihlale isikhathi eside.
1. Qala ngezinwele zekhwalithi
Thenga njalo izinga eliphezulu, 100% izandiso zezinwele zabantu uma ufuna zihlale isikhathi eside. Noma yini enye futhi kungakhathaliseki ukuthi wenzani, ngeke bakwazi ukubamba ukukhazimula kwabo, isimo sabo, nobuhle isikhathi eside.
2. Gwema imikhiqizo esekelwe kuwoyela
Kuye ngohlobo lwesandiso, imikhiqizo esekwe kuwoyela ingadala umonakalo esandisweni. Cabanga izandiso ziphuma njengoba udlula isandla sakho phakathi kwezintambo zakho. Siyaqiniseka ukuthi akuyona into ozoyifuna. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi ufunda imiyalelo yokunakekelwa kahle, bese ucela izincomo kumhleli wakho wesitayela uma ungaqiniseki.
3. Phatha ngokucophelela
Geza izandiso zakho njengoba kudingeka. Uma ngezandiso ezihlala njalo, akufanele ulale izandiso zakho zimanzi, noma uzoba nenani elinzima ozolikhokha ngakusasa ngesiphithiphithi esididayo. Ngeziqeshana ezingaphakathi nezinye izandiso zesikhashana, qiniseka ukuthi zomiswe kahle nokuthi unamathuluzi afanele ukuzinakekela isb., amabhulashi. Yiba nezikhathi ezijwayelekile zokulungisa, njengoba ubungenza ngezinwele zakho zemvelo.
4. Ungadluli isitayela
Izandiso zezinwele njengezixhumanisi ezincane kanye ne-fusion bonding ayingunaphakade futhi ingahlala noma kuphi phakathi kwezinyanga ezi-4-6. Ngakho-ke, ngokwemvelo, uzolingeka ukuthi ufune ukuzama izitayela ezihlukahlukene. Kodwa, kukhona into efana nokwenza kakhulu, futhi ufuna ukukugwema lokho ngazo zonke izindleko.
5. Khawulela isitayela sokushisa
Ngokulandela ithiphu yethu engenhla, kuhle ukugwema izitayela zokushisa eziningi kakhulu. Ama-curling irons namanye amathuluzi esitayela ashisayo asetshenziswa kaningi azomisa izinwele kuphela. Futhi uma usebenzisa ukushisa, khumbula ukuthi izandiso ngokuvamile zidinga umsebenzi omncane kunezinwele zethu zemvelo. Ngakho-ke qaphela ukuthi ugcina isikhathi esingakanani insimbi namanye amathuluzi ahlobene nokushisa ezinweleni zakho. Futhi ngenxa yokuthi ziyizinwele zomuntu, ungasebenzisa isivikelo sokushisa lapho wenza isitayela sokushisa njengoba kudingeka ukuze uvikele izandiso zakho.
6. Gcina izandiso zezinwele zakho ngendlela efanele
Uma ugqoke izandiso eziphuma ekupheleni kosuku - njengama-clip-ins namawigi - qiniseka ukuthi uwagcina ngendlela efanele. Ungamane uzikhumule noma uzisuse futhi uzibeke noma kuphi. Khipha kalula izandiso zakho futhi uzigcine endaweni epholile, eyomile, noma endaweni yokubeka iwigi yakho. Indlela engcono kakhulu yokuqinisekisa ukuthi wenza lokhu njalo ukudala isimiso sezinwele esenza lokhu kube inqubo elula ye-1-2 nsuku zonke. Ukuze uthole isitoreji sesikhathi eside qiniseka ukuthi izandiso zihlanzekile futhi zome ngendlela efanele, bese uzigcina esitsheni esingangeni moya.
7. Mboza ngenkathi ulele
Futhi okokugcina – ikepisi lakho lokulala. Siyazi ukuthi usuyakwazi lokhu. Kodwa ithwala ukuphindaphinda. Uma ugqoke izandiso ezihlala njalo, kufanele uhlale ulala ngebhonethi ye-satin ukuze uvikele izintambo zakho. Gcina ikepisi lakho eduze kombhede wakho ukuze kuthi noma ungena ngaphambi kokusibekela, libe lapho eduze.
Nakho-ke usunayo. Izindlela eziyisi-7 zokunakekela izandiso zezinwele zakho futhi uzenze zihlale isikhathi eside.
Ngakho-ke, sitshele, usukwazi isikhathi esingakanani ukugcina izandiso zezinwele zakho? Futhi ubusebenzisa ikhwalithi ephezulu, 100% izinwele zabantu njengalokhu esithengisa lapha kwa-SL Raw Virgin Hair?